Lockdown ine Mhedzisiro: Semuenzaniso Israeri
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Lockdown ine Mhedzisiro: Semuenzaniso Israeri
Kuputsa Israel Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Israel kuti igadzire ndebvu-inoshamwaridzika COVID-19 masiki ezvitendero zvetsika
Mabhizimusi mazhinji muIsrael anoonekwa ari panjodzi yekuvharwa kubva pane izvo zviri kurondedzerwa kusvika pari zvino nyaya yepasi rese yekudzimiswa kwechipiri munyika nekuda kwechirwere checoronavirus
Muzvinabhizimusi wepamusoro muIsrael ari kuyambira pamusoro pezvemhedzisiro yehupfumi kubva mukukiya nyika yechipiri, nehurumende neSvondo yakabvumidza kuvharwa kwemavhiki matatu kutanga vhiki rino nekuda kwezviitiko zvinokonzeresa zvecoronavirus.
Mubvunzurudzo neThe Media Line, Uriel Lynn, purezidhendi weFederal of Israeli Chambers of Commerce, akasimbisa kuti njodzi huru kubva kune imwezve kukiyiwa ipfungwa yekuita kuti varidzi vemabhizinesi vavharirazve vatengi.
"Mabhizinesi ese anonyatso kurudzirwa nevanhu," Lynn akaudza The Media Line.
“Kana iwe uchida kuona bhizinesi richipfeka kana kuuya munyika, unofanirwa kuva nechikurudziro [kana] chirongwa nemunhu. Hazviitike zvega, ”akadaro. "Kana iwe… wabvisa izvi, uchave nedambudziko rakakura."
Kutengeserana uye masevhisi muIsrael anoverengera 69% yebhizinesi GDP uye anoshandisa 73% yevanhu vanoshanda munzvimbo dzakazvimiririra, sekureva kwaLynn, anoomerera kuti aya magezi ndiwo anotyaira hupfumi, nekudyiwa kwakazvimirira muIsrael paNIS 760 bhiriyoni, kana anenge madhora mazana maviri nemakumi maviri emadhora, gore rapfuura.
"Kana iwe uchitaura nezve kutengeserana nemasevhisi, chikamu chakakosha kubatana kwauinako neruzhinji rwevanhu," anodaro. "Ukangodambura kubatana uku ... iri ndiro dambudziko guru."
Inofungidzirwa kuti zuva rega rega rekuvhara nyika yose rinodhura hupfumi NIS 1.8 bhiriyoni. Zvakare, iyo Ministry Yezvemari yakayambira svondo rapfuura kuti kuvharwa kwenyika kuzoguma nekurasikirwa kwema400,000 kusvika 800,000 emabasa.
Kukiya kwakatemwa nedare remakurukota neSvondo kuchamanikidza vanhu kuti vagare mukati memamita mazana mashanu kubva kumba chengetedza nzendo dzeku supermarket, chemishonga, kana chiremba. Kufamba pakati pemaguta nekuungana kwevanhu kucharambidzwa. Zvikoro zvichavharwa kusara kweavo vane vadzidzi vezvedzidzo yakasarudzika. Mabhizimusi asingakoshi anofanirwa kuvharwa, nemaresitorendi anowanikwa chete kwekutakura kana kutora.
Pakupedzisira, hurumende ichadzokera ku "traffic light" hurongwa hwatove kushanda, iyo inoronga maguta nenzvimbo dzakatenderedzwa neruvara zvichibva pane yavo coronavirus hutachiona hwehutachiona.
Iyo yekuvharira chikumbiro ine nharo. Yaakov Litzman, nhengo yepamusoro-soro yeultra-Orthodox United Torah Judaism bato, akasiya chigaro chake segurukota redzimba nedzokuvaka nemusi weSvondo, achiti zvichaita zvisina tsarukano kunamatira vanamati panguva dzeMazuva Matsvene eRosh Hashana, Yom Kippur neSukkot.
Sangano re-ultra-Orthodox renyika nderimwe rematambudziko akanyanya nedenda iri, nemhuri zhinji dzichikura uye dzichirarama munzvimbo dzakazara vanhu, uye vanarabhi vazhinji vachideredza masimba ehurumende. Uye zvakare, huwandu hwakawanda hwehupenyu hwechiJudha hwechitendero hwakatarisana neboka, zvichiita kuti coronavirus clampdowns iome zvakanyanya munharaunda.
Gurukota rezvehutano Yuli Edelstein akange ayambira pakutanga kwemusangano wedare remakurukota neSvondo kuti aisazogadzirisa shanduko iyi.
Kubva Svondo, huwandu hwese hwehutachiona hwecoronavirus muIsrael hwakamira pa153,759, iine 513 varwere vakanyorwa mune yakaoma mamiriro uye 139 pane ekufema, sekureva kweHutano Ministry. Vanhu vanosvika zana nemakumi masere nevasere vakafa nechirwere checoronavirus.
Roee Cohen, purezidhendi weLahav, Israel Chamber of Independent Organisations nemabhizinesi, akaudza The Media Line kuti mabhizinesi madiki muIsrael achiri kuyedza kudzoka kubva pekutanga kukiyiwa.
Hwerengedzo yemabhizimusi makumi matatu akatovharwa gore rino, sekutaura kwaCohen, uyo akataura kuti mugore chairo, mabhizimusi angangoita zviuru makumi mana kusvika makumi mashanu akavharwa, achiwedzera kuti gore rino, zviuru makumi masere zvinofungidzirwa kuti zvichaenda pasi.
"Mamiriro ehupfumi akakomba semamiriro ehutano," akadaro Cohen. "Hurumende inoda kutsvaga mhinduro pazvinhu zvese izvi."
Cohen anotaura zvekudya.
"Ko, semuenzaniso, maresitorendi?" Akabvunza. "Vane mhando dzose dzezvinhu zvavakatenga, uye zvino vanofanirwa kurasa zvese?"
Nyaya yekupa zvinhu iri kunyanya kunetsekana naOrit Dahan, muridzi uye maneja wePiccolino Restaurant muJerusarema.
Dahan akaudza The Media Line kuti iyo resitorendi inoisa maoda pachine uye kuti kana paine kusagadzikana, haizokwanise kuodha huwandu hwakakwana hwezvirimwa, zvichireva kuti anogona kuzorasa kana kupa chitsama chakakura chekudya.
Munguva yekutanga kukiya muna Kurume, mudyari aifanira kukanda zviuru zvemashekeri anokosha echikafu. Parutivi rweflip, kana resitorendi inoramba yakavhurika ikakundikana kuodha chikafu chakaringana, inogona kunge isina kukwana kugadzirira vatengi
"Kusava nechokwadi kunoita kuti tirambe tichinetseka pane kushanda nekugamuchira vaenzi," akadaro.
Dahan ane vana vana, zera 23, 16, 14 uye 5½. Mwanasikana wake wedangwe arikuroja furati, asi vamwe vana vese vari pamba.
“Vari kudzidza paZoom. Vane zuva rimwe chete pasvondo neZoom, uyezve nerimwe zuva ravanenge vari kuchikoro. Kana paine kukiyiwa, vanozove vari paZoom zuva rese, ”anodaro.
Dahan anoti vana vake vanogona kubata kure nekudzidza vari vega, kunze kwemudiki wake, waanogona kuchengeta nekuti haashande muresitorendi.
"Asi kana uine vana vadiki kumba uye iwe uchishanda, idambudziko," anodaro. "Dambudziko guru revabereki."
MuIsrael mune vana vangangosvika zviuru zviviri vane hurema hwakakomba uye zviuru zviviri vane hurema hwekuona, vazhinji vacho vachidzidza muzvikoro zvakajairika uye nekudaro zvakakanganiswa nekuvharwa, sekureva kwaYael Weiss-Akanaya, director director weOkek Liyladenau - Israel National Association yeVabereki ve Vana vane Hupofu uye Kutadza Kuona.
"Patakatanga kuvharirwa, kukanganisa kwevana vane hurema hwekuona uye kupofumadza kwairema uye kukuvadza zvakanyanya nekuda kwekushayikwa kwekujeka kwezvirambidzo zvakasiyana," Weiss-Rained akaudza The Media Line.
"Zvakava zvakaoma zvikuru kuvabereki nevana," akadaro. "Vana vedu vanovimba zvikuru nekubata uye kufamba uye kunzwa zvinhu uye kugona kubata maoko nevanhu vanovabatsira kufambisa uye kuverenga."
Ofek Liyladenau akasvetukira mukuita panguva yekuvharira kwekutanga, kusanganisira nekuvhura nzvimbo yekukurumidzira kutsigira vadzidzi nevabereki, kugadzira hotline nevashandi vezvemagariro uye varapi vezvepfungwa, vachipa makumi maviri nemaviri mawebhusaiti nekupa zviitiko zvekuvaraidza nekuzorora zvevana kuti vapfuure nguva.
Kuratidzira kwemazuva ese kwave kuitika kunze kwemuzinda weHurumende, VaBinyamin Netanyahu, muJerusalem nemunyika yese. Vachamiswa neimwe kukiyiwa here?
Asaf Agmon, mumwe wevari kuronga kuratidzira, akaudza The Media Line kuti Dare Repamusorosoro rakambotonga richida kubvumidza kuratidzira, achiwedzera kuti kukiyiwa kwacho kune chekuita nezvematongerwo enyika.
"Unogona kuona kubva pane zviri kutaurwa nevakuru vezvipatara zvedu zvese, kuti hapana chekururamisa mutambo uyu unokonzeresa kukuvara kukuru, dambudziko muhupfumi hwedu," akadaro Agmon. "[Netanyahu] ari kuedza kumisa kuratidzira uku, asi haazokwanise."
naJOSHUA ROBBIN MAKO, Iyo Media Line
Passenger Ndege Njodzi muSiberia, Vese 19 vari muBhodi ...
Etihad Airways yatanga ndege kuenda kuVienna, Austria
Indonesian mushanyi paradhiso Bali anoenda kune yakaoma ...
Dzisiri-EU nyika dzabatana nesarudzo yeEU yekurambidza Belarusian ...